Canarian mena picón mojo mena | ThermoRecipes
Saosy mena picón mojo mena
Saosy5 minitraOlona 250 g75 kaloria
Espaniôla dia manana gastrolojia tsy manam-paharoa ary, na aiza na aiza alehantsika, dia hahita lovia sy vokatra mahafinaritra izahay. Androany aho mitondra saosy mahazatra matsiro avy any amin'ny Nosy Canary: mena picon mojo.
Mety indrindra izy io miaraka amin'ny ovy ketrona (izay havoakako tsy ho ela ny resiny), fa koa ny hena, legioma, hazan-dranomasina na trondro, toy ny ranomasina amin'ny sira.
Resipeo io tena tsotra miomana, izay ho vonona ara-drariny isika 5 minutos. Ho fanampin'izay, dia ekonomika be izy io ary manana tsiro mahery vaika sy matsiro.
1 Saosy mena picón mojo mena
Sosy mena Picón mahafinaritra sy mahafinaritra, mahafinaritra, vao tonga avy any amin'ny Nosy Canary, mety indrindra ho ovy, hena, legioma na trondro miketrona.
Fanompoana: 250 h
Jirofo 4 tongolo lay
Tavoahangy 1 (1/2 raha tsy tia masiaka loatra ianao)
Kininina sotrokely 1 sotrokely
Menaka oliva virjiny 150 gr
Paprika mamy 1 sotro fihinanana
Sombin-mofo 1 eraky ny iray andro talohan'io
Apetrakay ao anaty vera sy programa ny komina 2 minitra, maripana 100, hafainganam-pandeha 1. Miala izahay.
Ampio ny tongolo lay voakelaka sy ny potipotika amin'ny vera ary apetaho 5 segondra, hafainganam-pandeha 5.
Ampio ny sakay sy komina voatsatsika izay notehirizinay sy nafangaro 20 segondra, hafainganam-pandeha 7.
Ampio ny sira, menaka, vinaingitra sy paprika ary afangaro 30 segondra, hafainganam-pandeha 5. Avy eo izahay dia manao programa 2 minitra, hafainganana mandroso 5-7-10.
Manandrana sy manitsy amin'ny sira na vinaingitra izahay.
Fanazavana fanampiny - ranomasina amin'ny sira
Loharano - Boky tena ilaina (Vorwerk)
Mitadiava fomba fahandro hafa momba ny: Sakafo rezionaly, Tsotra, Latsaky ny 15 minitra, Saosy, Vegan, tsy mihinan-kena
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Thermorecetas » General » Sakafo rezionaly » Saosy mena picón mojo mena
Emma-manonofy dia hoy izy:
Salama, manaraka anao matetika aho ary na dia tsy mandray anjara aza aho dia mitazona ny resinao, ary na dia mbola betsaka aza ny zavatra tokony hataoko. Mandroso miadana aho fa ampy tsara.
Amin'ity saosy ity, na dia tsy ortodoksa loatra aza izy io, dia matetika no ampiasaiko, mba hamonoana ny henan'ireo barbecue, na elatra akoho hanaovana azy ao anaty lafaoro. Tena tsara sy be ranony.
Miarahaba sy miarahaba.
Mamaly an'i Emma-dreammore
Salama Emma! Tongasoa eto amin'ny Thermorecetas ary misaotra anao noho ny namelanao ny hevitrao (manantena izahay maro hafa !!) ary koa amin'ny fanarahana anay. Ity saosy ity, na dia mahazatra miaraka amin'ny ovy miketrona aza, miaraka amin'ny hena dia mahafinaritra, noho izany dia tsy isalasalana fa ho an'ny barbecue na akoho namboarina dia tantara ratsy io. Misaotra betsaka nanoratra taminay! Famihinana.
mandra-pahoviana no maharitra nefa tsy manimba
Salama Lola, ao anaty vata fampangatsiahana mandritra ny 5 andro. Raha tianao haharitra kokoa izy io dia araraoty ny fotoana anaovana azy ireo ao anaty siny fitaratra, fenoy ambony izy ireo ary ataovy ao anaty fandroana rano mba ho vita tsara izy ireo. Amin'ity fomba ity dia haharitra 6 volana ao amin'ny pantry izy ireo, fa tsy mila mangatsiaka. Tsara vintana!
Misaotra Irene, efa nahavita azy aho, niaraka tamin'ny ranomasina niaraka tamin'ny sira, nahandro tsara
Mmmmm fifangaroana tsara. Misaotra betsaka tamin'ny hafatrao Lola. Oroka!
Ho fanampin'ireo akora ilaina dia ampiako sakamalaham-bary, ary matsiro, dia ataoko amin'ny ozatra naoty mmmm ..
Ooohhh Patricia izay hevitra tena lehibe !! Marihiko tsara, hanomanana azy ireo amin'ny akamako ... Heveriko fa fifangaroana mahatalanjona izany !! 🙂
Angeles Exposito dia hoy izy:
Miala tsiny aho fa mifanohitra aminao, fa ny fomba fahandro anao dia tsy mifanaraka amin'ny mojo mena Kanadiana, izay natao tamina karazana poivitra maina, nohosorana teo aloha, ary tsy nisy niraikitra tamin'ny paprika na veromanitra.
Valio amin'i Ángeles Exposito
Misaotra Anjely. Te hizara eto ve ianao hoe inona ilay recette marina? Ka samy afaka mahafantatra azy isika !! Misaotra amin'ny hafatrao 😉
Vary malefaka miaraka amin'ny legioma voatoto
Pancakes legioma miaraka amin'ny ovy sy chard